China AUMAN EST DUMPER ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
Higher iga arụmọrụ na elu ebu ikike
Mbanye Style 6 * 4 8 * 4
Oke Oke 85/95 km / h
Na mgbakwunye na ọrụ injinia chọrọ, Auman EST dump truck bụ nke ndị ọkachamara Benz haziri nke ọma ma mezue ma wuo ya dịka ụkpụrụ European si ghọta isi mmalite nke usoro ntụkwasị obi, arụmọrụ ike, nchekwa mmanụ, na nchekwa, nkasi obi weta ahụmịhe bara uru nke arụmọrụ ụgbọ njem dị elu na ikike ibugharị dị elu maka ndị ahịa.
The gwongworo na-kwadoro site na Cummins niile-ọhụrụ ISG engine featuring elu torque mmepụta na ike ọkwaabiilty; a na-eji usoro teknụzụ Benz rụọ ọrụ nke ọma ka o wee nye ya egwuregwu zuru oke ma mekwaa arụmọrụ dị elu.
2,000bar mmezi-elu nsogbu ogwu ogbugba
12L nnukwu Ndahie igwe
2,300NM kachasị ihe nrụpụta
Igwe enyemaka nke iBrake na-enweta 370ps ikike kachasi ike braị akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ sara mbara: Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ sara mbara nke ụlọ ọrụ na-ebelata ogologo oge braking site na 20%.
The tagzi jiri usoro ihe eji arụ ọrụ nke ejiri ígwè 1mm buru ibu rụọ site na ígwè ọrụ mgbatị dị elu wee gafee ule ihu ihu na n'akụkụ, ule ike ụlọ, na ule mgbochi nkuku ihu.
Nchedo System Lighting
Igwe ọkụ na-acha ọkụ ọkụ n'abalị, gụnyere oriọna dashboard, oriọna oghere, na oriọna abalị na mpempe akwụkwọ azụ, na-eme ka nchekwa nke ọrụ abalị.
A na-etinye ihe eji emegharị ihe na-eme ka a na-agbazi 130mm nke dị elu ma na-eme ka mgbapụta mgbapụta na-adịghị mma iji hụ na ọ dị mfe ma na-agbanwe agbanwe na nchekwa nchebe dị elu.
The kachasị kpuchie Ọdịdị na U-ụdị imewe nwere ike izute na-arụ ọrụ ike mkpa na belata ibu.
A na-eji akwa ígwè siri ike mee ihe dị elu na ≥800MPa na-enye ike na ≥300HB Brinell siri ike iji meziwanye njigide mkpuchi na nkwụsị nke corrosion ma mee ka ndụ dị ogologo.
A na-etinyere ụdị U-ụdị nke usoro nhazi nke ọma iji ghọta ihe na-adọrọ adọrọ, na-enweghị ihe ọ bụla agbasoro, ma dozie nsogbu nkwụsị ngwa ngwa n'oge ibugharị ihe na njigide dị elu.